Computer,Pen Drive,Memory Card ထဲက မှားဖျက်မိတာတွေ ပြန်လိုချင်ကြရင် - နည်းပညာ
9/20/2012 05:56:00 AM Computerနည်းပညာ, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
ကျွန်တော် backup လုပ်တဲ့ အကြောင်းလေးတခုပြောပြချင်လို့ပါ..ပြောပြလို့ ရတယ် မဟုတ်လား..မရလည်း ပြောမယ်ဗျာ..
ဒီလိုလေ ကိုယ့် Computer.Memory Card .Pen Drive(Flash drive) ထဲက အမှတ်တမဲ့ မှားဖျက်မိတဲ့ ပုံတွေ.သီချင်းတွေ.ဖိုင်တွေ ကိုပြန်ယူလို့ရအောင် လုပ်လို့ရတယ်တဲ့ ဗျ..လုပ်ကြည့်ကြပေါ့..ဒါပေမဲ့ တခုတော့ သတိပေးမယ်..ကြာသွားရင် တော့ဆောရီးပါ.ကိုယ် မှားဖျက်လိုက်မိပြီ ဆိုတာသိတာနဲ့ ကွန်ပြူတာ ကိုဘာမှ မခိုင်းတော့ပဲ ပြန်ယူရင်ရပါတယ်...တကယ်ကောင်းပါတယ်..Try ကြည့်ပါ..
software လေး လိုလို့ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါအုံး...
ရပြီဆိုတာနဲ့ Install လုပ်ပါ..တကယ်လုို့ ကိုယ်ကမှားဖျက်လို့ ပြန်လိုချင်ရင် အောက်က အတိုင်းသာ လိုက် လုပ်ပါ..ကျွန်တော် ဖျက်မိတဲ့ ပုံကို ဘယ်လိုပြန်ယူလဲဆိုတာ ဥပမာ ပြမယ်..ခုနက install လုပ်ထားတဲ့ software ရဲ့ Desktop ပေါ်က icon လေးကို ကလစ် နှစ်ချက်နှိပ်ပါ..
ကျလာတဲ့အကွက်မှာ Yes ကိုနှိပ်ပါ..ဒီပုံအတိုင်းကျလာလိမ့်မယ်...Next ထပ်ကိုနှိပ်ပါ..
ကိုယ် ဖျက်ထားတာ ပုံ ဆိုတော့ Pictures ကိုအစက် လေးပေးပါ..ပုံ ထဲကအတိုင်းနော်..
ဲပြီးရင် Next ကို နှိပ်ပါ.
ဒီအဆင့်မှာ ကိုယ်ဖျက်မိတဲ့နေရာ ကိုရွေးရပါ့မယ်..ကျွန်တော်က Recycle Bin ထဲကဖျက်လိုက်တာဆိုတော့ Recycle Bin ရှေ့မှာပဲ အစက်လေးပေးလိုက်ပါမယ်..ကိုယ် ဖျက်မိတဲ့နေရာ
ကိုယ်ဘာသာရွေးပါ..ပြီးရင် Next နှိပ်ပါ..
အောက်ကပုံအတိုင်း ကျလာရင် start ကိုနှိပ်ပါ..
Start ကိုနှိပ် လိုက်တာနဲ့ scan စလုပ်ပါပြီ..
scan ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံလိုဇယားကွက်ကျလာလိမ့်မယ်..အဲဒီမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကိုဖျက်မိတဲ့
ဖိုင်မှာ အမှတ်လေး သွားခြစ်ပါ..ပြီးရင် Recover ကိုနှိပ်ပါ..
Recover ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်မှာ save မလဲလို့မေးတဲ့အကွက်ကျလာလိမ့်မယ်...ကိုယ် save ချင်တဲ့နေရာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..Ok နှိပ်ပါ..
Ok နှိပ်လိုက်ရင် ဒီလိုထပ်ကျလာလိမ့်မယ်...Yes ကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ..
ပြီးရင်ဒီလို ပုံစံလေးတခု ထပ်ကျလာအုံးမှာပါ.ဒါဆိုရင် Ok နှိပ်လိုက်ပါ..Ok နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မှားဖျက်တာတွေ ကိုယ် save ခိုင်းထားတဲ့နေရာဆီ ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်.... ဟုတ်ကဲ့..ပြောလို့ဝ သွားပါပြီ..မောသွားတာပဲ.....ကျေဇူးတင်ပါတယ်..